दुई कम्पनीको सर्किट लेभलमा कारोबार, प्रतिकित्ता शेयरमूल्य कति ? - नेपालबहस
दुई कम्पनीको सर्किट लेभलमा कारोबार, प्रतिकित्ता शेयरमूल्य कति ?
| ११:०८:३१ मा प्रकाशित
२१ बैशाख, काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलबार नेप्सेमा दुई कम्पनीको सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । यस दिन बजार खेलेको केही समयमा महिला लघुवितत र सिंगटी हाइड्रो शेयरमा सर्किट लागेको हो ।
यस दिन महिला लघुवित्तको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता ४ हजार १५८ रुपैयाँ पुगेको छ । छोटो समयमै कम्पनीका लगानीकर्ताले उक्त कम्पनीको शेयरबाट आकर्षक प्रतिफल प्राप्त गरेका छन् । कम्पनीको शेयर कारोबारमा आएको तेस्रो दिन देखिनै सर्किट लेबलमा वृद्धि हुँदै आएको छ । एक महीनामा १ हजारको लगानी ४० हजार पुगेको छ ।
सिंगटी हाइड्रोको प्रतिकित्ता शेयरमूल्य ४ सय ८१ रुपैयाँ पुगेको छ । आज यी दुई वटै कम्पनीको शेयरमा विक्रेताभन्दा क्रेता धेरै भएकाले शेयरमूल्यमा वृद्धि भएको हो ।
महिला लघुवित्तको पछिल्लो ४५ दिनमा उच्च शेयरमूल्य वृद्धि हुने पहिलो कम्पनी हो । लघुवित्तले करिब दुई महिना पहिलो सर्वसाधारणको लागि आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । उक्त आईपीओ नेप्सेमा सूचीकृत भएसंगै कम्पनीको शेयरमूल्यमा दैनिक सर्किट लाग्दै आएको छ ।
सिगंटी हाइड्रोको शेयर वैशाख १५ गते (बुधवार)देखि कारोबारमा आएको हो । कम्पनीले नेप्सेमा पहिलो कारोबारको लागि ओपन रेञ्ज १०० देखि ३०० सम्म तोकेको छ ।
नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि नेटवर्थको तीन गुणासम्म मूल्य रेञ्ज तोक्ने गर्दछ ।
राधी विद्युतसहित नौ कम्पनीका लगानीकर्ताले धेरै कमाए, कुनले कति कमाए ? २० घण्टा पहिले
दुई प्रतिशतले बढेको बजारमा १० अर्ब ४० करोडभन्दा बढीको कारोबार २ दिन पहिले
आइतबार यी आठ कम्पनीको सर्किट लेबलमा कारोबार २ दिन पहिले
बारामा घाँटी रेटेकाे अवस्थामा २ बालकको शव फेला ! १३ मिनेट पहिले
बर्दिबासमा सैनिक फिल्ड अस्पताल सञ्चालन ३१ मिनेट पहिले
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा ६ घण्टामा ४ संक्रमितको मृत्यु ३४ मिनेट पहिले
टोखालाई ३ थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग ३८ मिनेट पहिले
सरकारी गाडीमै काठ तस्करी:- वन कर्मचारीमाथि दवाव र प्रभाव चर्को १७ घण्टा पहिले
प्रिय कमरेड, तपाईहरु सँधै हाम्रो स्मरणमा रहिरहनुहुनेछ: उपप्रधानमन्त्री पोखरेल २३ घण्टा पहिले
कोभिडका कारण राप्रपाको केन्द्रीय महाधिवेशन स्थगित ३ दिन पहिले
नेपाल र ओलीबीच भेट तय ५ दिन पहिले
उपत्यकामा थप २६०९ जनालाई कोरोना पुष्टि २ दिन पहिले
चैत मसान्तमा मुनाफा घटेका तीन बैंकसहित सात कम्पनीको उच्च शेयर माग, कुनको कति ? ६ दिन पहिले
लागुऔषध चरेससहित दुई पक्राउ २ दिन पहिले
बैंक अफ काठमाण्डूसहित १२ कम्पनीको उच्च शेयर माग, कुनको कति ? १७ घण्टा पहिले
हेलिकोप्टरमा बिरामी जाँच गरिँदै ५ दिन पहिले
टेलिकमको भिओएलटीई सेवा परीक्षण शुरु २४ घण्टा पहिले
लागुऔषधसहित दुई भारतीय नागरिक पक्राउ १ हप्ता पहिले
सैन्य सङ्गठनमा प्रतिकूल हुने कार्य नगर्न थापाको निर्देशन ४ हप्ता पहिले
नभाल्नीको केही दिनभित्र ज्यान जान सक्ने चिकित्सकको चेतावनी ४ हप्ता पहिले
गायब सांसद शाहीको विज्ञप्ति ३ हप्ता पहिले
शहरी क्षेत्रको विद्यालय बन्‍द गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय ४ हप्ता पहिले
नेपाली कांग्रेस आन्तरिक रणनीतिमा १ हप्ता पहिले
जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई राहत २ महिना पहिले
लमजुङमा २३ हजार जनाले गरे कोरोना परीक्षण १ वर्ष पहिले
बाँकेको परिस्थिति भयावह हुन नदिनु : उपप्रधानमन्त्री २ हप्ता पहिले
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार १ वर्ष पहिले